Zhe Jiang XinHong Electric Co., Ltd.is miorina ao Xiangyang faritra indostrialy, Liushi, Yueqing, Wenzhou, Zhejiang, Sina. Liushi no renivohitry ny ambany-malefaka inChina fitaovana. Xinhong dia ampiarahana amin'ny Shanghai Kangji elektrika Fitaovana Co ,. Ltd sy Shanghai Dikai Electric Appliance Co ,. Ltd mba matihanina ho an'ny fikarohana, ny fampandrosoana, ny famokarana, ny varotra sy ny asa fanompoana. Miara-miasa amin'ny maro fanta-daza ao an-toerana sy avy any ivelany lehibe sy salantsalany orinasa for OEM .. Ary Shanghai Kangji elektrika Fitaovana Co ,. Ltd sy Shanghai Dikai Electric Appliance Co., Ltd dia miorina ao Songjiang, faritanin'i Shanghai.
Products: tsy miankina fikarohana sy ny fampandrosoana ny AC contactors (AC_and_DC_du-al-ampiasaina. Low fiakaran'ny mari-pana sy ny fanjifàna ambany fahefana. Fanarahana fari-IEC60947.2). manohitra manokana latsaka (Feng Xing) contactor for elevator.Special contactor rano boiler.ac contactor.dc contactor.auxiliary fifandraisana andian-tsoratra, ny fotoana ela block.star Delta starterDouble, fonosina starterDouble, mafana be loatra fifandimbiasana sy ny sisa.
Enterprise hery: manana laboratoara, sampan-draharaha-barotra, ny fikarohana sy ny fampandrosoana departemanta, sampan-draharahan'ny orinasa mpamokatra entana, tsara sampan-draharaha, ny fitantanana ny sampan-draharaha sy ny manam-pahaizana matihanina ekipa, dia tena manatanteraka ny EIP fitantanana. Ny orinasa efa tanteraka nandeha namaky ny taratasy fanamarinana ny kalitaon'ny IS09001 rafitr'ity tontolo ity. Ny vokatra dia voamarina ny CCC sy ny taona, dia efa nanjary fikarohana sy ny andian CNC5 AC contactor sy ny CNC6-T manokana anti-latsaka (Fengxing) contactor ny ascenseur. Products mahafeno ny fenitra-pirenena ho an'ny angovo fahombiazana sy ny haavon'ny endrika efa tonga ny tari-dalan'ny sehatra ao an-trano sy any ivelany. Mandray ny hevitry ny maro an'isa avo mpanjifa sy ny vokatra no aondrana toKorea, Brezila, India, Italia, Rosia, Taiwanand amin'ny firenen-kafa sy ny faritra.
Enterprise fanahy: fianarana, zava-baovao, tsy fivadihana, fanoloran-tena.
Quality politika: peopel oriented.qulity based.creativity sy ny accuracy.keep mandroso
Business filozofia: ny mpanjifa tinady ho toy ny lafin-javatra nitarika. fikarohana sy hampitombo-ara- famokarana avo lenta vidiny ambany entana
Enterprise fahitana: mba ho ny tsara indrindra contactor mpanamboatra.